अँध्यारो हुनको लागि तपाइँलाई आधारभूत युक्तिहरूको एक श्रृंखला आवश्यक छ बेजिया
चालहरू स्वस्थ ट्यान प्राप्त गर्न
सुसाना Godoy | 19/05/2021 12:00 | सुन्दरता
स्वस्थ तरीकाले खैरो प्राप्त गर्न र साथै, त्यो सुन्दर रंग रहनको लागि, त्यहाँ सँधै चरणहरू छन् जुन हामी अनुसरण गर्न सक्छौं। किनकि दरबारमा चीजहरू बिस्तारै जान्छ र यस अवस्थामा यो अन्यथा हुन सक्दैन। त्यसोभए, यो ब्याट्रीहरू लिने समय हो, किनकि त्यसो गर्दा हतारमा यो सबै छ।
त्यसो भए सुरू गरौं छाला हेरविचार, जुन सधैं सबैभन्दा आधारभूत विकल्पहरू मध्ये एक हो। तर बाहिरी भागमा मात्र होइन तर भित्रबाट हामीले एउटा यस्तो छनौट गर्नुपर्नेछ जसले हामीलाई आफैंलाई देख्न मद्दत गर्दछ, र पूरै स्वस्थ महसुस गर्न। के तपाइँ अब तपाइँको प्रक्रिया सुरू गर्न चाहानुहुन्छ?
1 तपाईंको छाला प्रत्येक दिन नमीमा राख्नुहोस्
2 एक्सफोलिएसनको बारे कहिल्यै नबिर्सनुहोस्
3 तपाईंको डाइटको ख्याल राख्नुहोस्
4 सनबेट गर्न सुरु गर्नुहोस् तर प्राकृतिक रूपमा
5 ट्यान प्राप्त गर्न सँधै सूर्य क्रीमहरू
6 सेल्फ टेनर
तपाईंको छाला प्रत्येक दिन नमीमा राख्नुहोस्
त्यहाँ चरणहरूको एक श्रृंखला हो जुन हामीले पत्र अनुसरण गर्नुपर्दछ। तसर्थ, हामीले हाईलाईट गर्नुपर्ने पहिलो मध्ये एक यो हो। तपाईंलाई पूर्ण हाइड्रेटेड छाला चाहिन्छ र यसका लागि, तपाइँलाई तपाइँको छालाको प्रकार सधैं मिल्ने क्रीम चाहिन्छ। तपाइँसँग सुख्खा वा संयोजन छाला छ भने, तपाइँ सबै भन्दा उपयुक्त एक पाउनुहुनेछ। यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये कुनैको लागि अप्ट आउट गर्नुहुन्न भने एलोवेरा प्रयोग गर्नुहोस्। एक तारा अवयव मध्ये एक र तपाईले यसको साथ क्रीम पनि फेला पार्नुहुनेछ। कुनै श doubt्का बिना, यसले एक अतिरिक्त कोमलता प्रदान गर्दछ जुन तपाइँलाई मनपर्दछ र तपाइँको छाला पनि। याद गर्नुहोस् यो सुत्नु अघि तपाईले हरेक बिहान र हरेक रात नुहाउन पछि यो लागू गर्नु राम्रो हुन्छ।
एक्सफोलिएसनको बारे कहिल्यै नबिर्सनुहोस्
हाम्रो छालाको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण चरणहरू पनि यो हो। बारेमा सम्पूर्ण शरीरभरि राम्रो एक्सफोलिएसन गर्नुहोस्। सबैभन्दा माथि, घाममा बाहिर जानु भन्दा पहिले मृत कोशिकालाई र छालालाई छिटो पुनर्जीवन दिन बिदाइ गर्नु उत्तम हुन्छ। तर यो याद गर्नुहोस् कि उही दिनमा जुन तपाईंले सूर्य लिनुभयो, यो प्रक्रिया पूरा गर्नु राम्रो होईन, बरु दुई दिन अगाडि। तपाईंलाई थाहा छ, त्यहाँ बिक्रीको लागि निर्दिष्ट उत्पादनहरू छन् र यदि होईन भने, तपाईं चिनी वा कफीको साथ थोरै मोइश्चराइजरलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईं नुहाउन सक्नुहुनेछ, आफ्नो मनपर्ने मोइश्चराइजर लागू गर्नुहोस् र त्यो हो।
तपाईंको डाइटको ख्याल राख्नुहोस्
यो सत्य हो कि तपाईले यो सबै बर्षे मात्र गर्नुपर्दछ र अँध्यारो मात्र होइन। तर अझै हामी तपाईलाई याद दिलाउँछौं कि तपाईले प्राकृतिक खाद्य पदार्थमा र शर्त राख्नु पर्छ, त्यसमा शर्त लगाउनु पर्छ ओमेगा 3। किनकि यसले तपाईको छाला हरेक कोशिका भित्रबाट रक्षा गर्दछ। त्यसोभए याद गर्नुहोस् कि दुबै माछा र निलो वा नटहरू केहि विचारहरू हुन् जुन ओमेगा have छन् र तपाईंले मिस गर्न सक्नुहुन्न।
सनबेट गर्न सुरु गर्नुहोस् तर प्राकृतिक रूपमा
यसको मतलब हाम्रो मतलब यो हो कि तपाईंले कुन झिंगे लगाउनुपर्दैन, घण्टा र घण्टा सूर्य जोखिम, तर सबै भन्दा राम्रो कुरा अलि अलि गर्दै जाँदा शर्त लगाउनु हो। यो कल्पना नगर्नुहोस् कि एक दिन तपाईं घाममा अधिक हुनुहुन्छ, ट्यानर तपाईंले प्राप्त गर्न लाग्नु भएको छ। किनकि छाला यसको बानी हुन्छ र कम समय भएर हिड्नु उत्तम हुन्छ जुन सूर्यलाई स्वागत गर्ने उत्तम तरिकाहरू पनि एक हो।
ट्यान प्राप्त गर्न सँधै सूर्य क्रीमहरू
अर्को अव्यवस्थित विचार अवस्थित छ कि यदि तपाई धेरै क्रीम लगाउनुहुन्छ भने, तपाई राम्रो श्यामला पाउँनुहुन्न। तर वास्तविकताबाट केहि पनि छैन। हामीलाई आफ्नो छाला जोगाउन सूर्य क्रीम चाहिन्छ। ती जलाउनबाट बच्न आवश्यक छ। तसर्थ, हामीले यसलाई समय-समयमा पुनःपूर्ति गर्नुपर्दछ, समय-समयमा नुहाउनुपर्दछ र शिखर घण्टा सूर्य घामबाट बच्नुपर्दछ। यी चरणहरूको साथ, तपाईंको श्यामलामा आईपुग्नेछ जब तपाईं यसलाई कम्तिमा आशा गर्नुहुन्छ।
यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामी कसरी राम्रो छनौट गर्न जान्दैनौं र सेल्फ टेनर लागू गर्नुहोस् हामी दाग ​​छौं। तसर्थ, हामीले राम्रो छनौट गर्नु आवश्यक छ र हामी सधैं सबै भन्दा स्वाभाविक मानिसहरूमा शर्त लगाउँछौं। हामीले तिनीहरूलाई हल्का मालिशको साथ लागू गर्नु पर्छ, सकेसम्म छाला तान्न। गर्मी र गहन सूर्यले टेन लिन थाल्नु अघि यो प्रयोग गर्नको लागि उत्तम विचारहरू मध्ये एक हो। के तपाईं तिनीहरूलाई पछ्याउनुहुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » सुन्दरता » चालहरू स्वस्थ ट्यान प्राप्त गर्न
घरको स्वागत गर्न मूल हलवेहरू
पोर्तुगाली तटमा आकर्षक गाउँहरू